By vijayafm on	 November 18, 2017 कोरोना अपडेट, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, साहित्य, स्थानीय
गैंडाकोट २ मंसिर ।
लेखक तथा पत्रकार कमल रिजालले लेखकस्व बापत प्राप्त रकम मौलाकालिका मन्दिरलाई प्रदान गर्नुभएको छ । साँग्रीला प्रकाशनले छापेको लेखक रिजालको नयाँ उपन्यास दृष्टिभ्रम बापत लेखक रिजालले पाउनु भएको एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ चेक मार्फत धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिकराम सापकोटालाई बुझाउनु भएको हो ।
समारोहमा सोहि पुस्तक माथी पनि अन्तरसंबाद गरिएको थियो । पुस्तक माथी बोल्दै डा. मतिप्रसाद ढकालले पुस्तक सामाजिक घटनाको प्रतिबिम्ब भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“एउटी महिलालाई कसरी बोक्सीको आरोप लगाइन्छ, त्यसपछि केकस्ता झमेला आईलाग्छन् जस्ता प्रसंगहरु कृतिमा सबिस्तार छ ।” मौलाकालिका मातालाई सम्बोधन गरेर सरुवात गरिएको उपन्यासलाई देविकै स्तुत्य गरेर अन्त्य गरिएको अर्का बक्ता डा. केशव चालिसेले बताउनुभयो । बोक्सी प्रथा नै एक दृष्टिभ्रम भएको उहाँको दावी थियो । प्रमुख अतिथि एलबी क्षेत्रीले उपन्यासले उठाएको बिषय अत्यन्तै राम्रो भएर पनि स्टक्चर ब्युटी कम्जोर भएको प्रतिक्रिया दिए । पाठकका तर्फबाट सुरेन्द्र अस्तफल र ईश्वर कँडेलले लेखकलाई दृष्टिभ्रम बारेको जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
लेखकले दृष्टिभ्रम बोक्सी प्रथा उन्मुलनको बिश्वब्यापी अभियान भएको बताउनुभयो । मौलाकालिका मन्दिरलाई आधार मानेर नवलपरासी र चितवनकै पेरिफेरिको बर्णन गरिएको उपन्यासको परिचर्चा गैंडाकोटमा गर्न पाउनु गैंडाकोट बासीको अहोभाग्य भएको आयोजक संस्था सिर्जन साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सूर्यप्रकाश भुसालले जानकारी दिनुभयो ।